आईफोनवाट ‘सेल्फि’ खिच्न पाउने भएपछि लक्ष्मी फुरुक्कै (भिडियो)…. – email khabar | Latest news of Nepal
आईफोनवाट ‘सेल्फि’ खिच्न पाउने भएपछि लक्ष्मी फुरुक्कै (भिडियो)….
प्रकाशित : २०७२ साउन ३१ गते १४:४१
काठमाडौँ – गायिका लक्ष्मि मल्लको सपना तिजमा पुरा हुने भएको छ । श्रीमान्ले आईफोन किनिदिन सहमत भएपछि ‘सेल्फि’ खिचेर सामाजिक सञ्जालमा तस्विर अपलोड गर्ने लामो समय देखिको रहर यस पटकको तिजमा पुरा हुने भएको हो ।
गायनमा श्रीमान्को रुपमा प्रस्तुत भएकाले अघिल्ला बर्षहरुमा श्रीमती बिग्रने डरले आईफोन नकिन्दे पनि यसपटक भने श्रीमतीको ईच्छा पुरा गर्ने बताएका छन् । यो तिजमा साथीहरुको श्रीमतीको तुलनामा कमी नगराउने संकेत गरेका छन् ।
प्रसंग तिजलक्षित गीतकै हो । यो तिजमा भएर जम्मा बोलको सदावहार तिज गीतका सर्जक श्रीकृष्ण बम मल्लको शब्द सृजनामा सर्जक तथा गायक बसन्त थापाको लयमा तयार भएको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएसंगै चर्चा चुलिएको छ । सर्जक श्रीकृष्ण बम मल्लका श्रीमती समेत रहेकी गायिका लक्ष्मि मल्ल र गायक बसन्त थापाले स्वर दिएको ‘सेल्फि’ बोलको गीतको सम्पुर्ण पक्ष उत्कृष्ट छन् । त्यसकारण यसपटकको तिजमा अग्रस्थानमै स्रोता तथा दर्शकको रोजाईमा पर्ने विश्वास गायिका लक्ष्मिको छ ।
गीतमा ‘सेल्फि’ को जमानालाई दुरुस्त उतारिएको छ । भनिएको छ –
भेट भयो की संगीतनीले मोबाईल झिक्न थाल्छन्
राम्रो राम्रो सेल्फि खिची फेसबुक तिर हाल्छन्
ए लाम्ला चुरा नाडीमा
यसपालिको तिजमा मलाई आईफोन किनिदेउन, सेल्फि खिच्नु छ बाबा रातो साडीमा प्रकाश भट्टले निर्देशन गरेको यो गीतको भिडियोमा दुर्गेश र करिस्माले अभिनय गरेका छन् । गीतलाई टि–टाईम म्यूजिकले बजारमा ल्याएको छ ।
आईफोनवाट ‘सेल्फि’ खिच्न पाउने भएपछि लक्ष्मी फुरुक्कै (भिडियो)..
डेढ अर्बको अलैँची निर्यात
अखण्ड पक्षधरको सुदुरपश्चिममा आम हड्तालको घोषणा